Kazakhstan: Mahita ny “fanafihan’i Shina tsy misy fitaovam-piadiana” ny bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2018 4:14 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jolay taona 2010 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Somary hita matetika ao amin'ny bilaogy amin'ny teny Kazakh ireo lohahevitra mifandraika amin'i Shina. Ireto ny sasany amin'izy ireo, ireo izay vao haingana indrindra. Fotoana vitsy lasa izay, namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Shina – toeran'ny mpampakatra” i Akzere. Milaza tantara mahaliana momba ny lehilahy Shinoa maniry hanana fianakaviana ny lahatsoratra. Namoaka dokambarotra manantena hihaona aminà tovolahy iray ny tovovavy mpianatra iray any amin'ny anjerimanontolo. Na dia izany aza, tsy nanantena hahita lehilahy efa ho 2000 teo anoloan'ny efitra lehibe iray fatorian'ny mpianatra izy! Iray amin'ireo mpamaky, Meirzhan, nanamarika hoe,
“Ny tsy fitovian'isa betsaka eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ao Shina maoderina no lasa iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny vanim-potoantsika izay tsy sahin'ny olona resahana.”
Miresaka momba ny fahasarotana amin'ny fahazoana zom-pirenena ho an'ireo Kazakhs te hody avy any Shina i Meirzhan ao amin'ny lahatsorany ao amin'ny Neweurasia. Namoaka lahatsoratra miresaka lohahevitra tahaka izany ihany izy tao amin'ny bilaoginy manokana, milaza hoe “Tsy mila Kazakh avy any ivelany i Kazakhstan“:
“Raha manakaiky ny tanàna na ny biraom-paritra tompon'andraikitra amin'ny fahazoana visa sy ny fanoratana anarana ho an'ny vahiny ianao, dia hahita ny rahalahintsika avy any Shina, maika ho ao, fa tsy mety mahazo visa ho any an-tanindrazany (Kazakhstan). Ary jereo ity: ny Shinoa sy ny Oighors, izay mila taratasy mitovy amin'izany, dia manome ny pasipaorony mena ary mahazo hajia sy taratasy manga miaraka amin'ny famantarana Kazakh tsy misy olana. Saingy tsy mba manana izany tombontsoa izany ny Kazakhs, voarara izany ho an'ny Kazakh; asaina ‘miandry’ ry zareo. “
Nahatezitra an'i Meirzhan ny zava-misy, nilaza ny fomba fijerin'ny namana akaiky azy ihany koa izy:
Mihevitra ireo Kazakh monina any ivelany fa olana voalohany tokony vahana ny fanangonana ireo Kazakhs mieli-patrana manerantany. Tsy mbola nandalo ny sain'izy ireo mihitsy ny hoe tsy mila azy ireo i Kazakhstan.”
Noresahana betsaka manerana ny Kaznet (aterineto ao Kaazakhstan) ny zava-misy amin'ny fiatrehan'ireo rahalahintsika ny olana ara-piteny (tsy miteny Rosiana) sy ny olana ara-kolotsaina rehefa miverina any Kazakhstan. Soa ihany fa misy olona afaka manampy azy ireo. Ohatra amin'izany ny mpianatra iray 22 taona avy any Shina nosoratan'ilay bilaogera Bahtgul65 (monina ao Ustkamenogorsk), mitondra ny lohateny hoe “Mirary ny fahombiazanao ry Nurzhan:
“… Amperinasa aho. Nisy andian-jatovo nisakafo tao amin'ny toerana fisotroana kafe. Rehefa niala izy ireo, dia nanatona ahy ny iray tamin'izy ireo ary nanontany hoe: ‘Nenitoa, misy asa ve ao aminao? Mitady asa ny anabaviko. ‘Nanoratra ny anarany sy ny laharam-pindainy aho, mikasa hiantso, raha sendra mila olona aho. Nanomboka niresaka izahay.
Hita fa mpianatra 22 taona i Nurzhan izay nifindra avy any Shina. Nilaza izy fa te-hanokatra toeram-pisotroana kafe tahaka ny ahy, saingy tsy mahay ny antontan-taratasy ilaina izy ary tsy mahay miteny Rosiana. ‘Na Kazakh aza miteny Rosiana eto,’ hoy izy nanamarika.
Nodimandry ny ray aman-drenin'i Nurzhan rehefa niverina tany Kazakhstan izy ireo. Manana zandry roa vavy karakaraina izy. “
Bilaogera Ertai, izay monina sy mianatra any Shina, kosa namoaka lahatsoratra mahaliana momba ny olana ara-tsosialy sy ara-politika any. Ao amin'ny lahatsorany. “Military competition (fifaninanana ho miaramila)”, nanoratra momba ny fikasan'ny tafika Shinoa hisongona ny Amerikana izy. Manome ity manaraka ity avy amin'ny boky Nofinofin'ny Shinoa, nosoratan'ny kolonely Shinoa iray izy:
“Ao anatin'ny 10-20 taona manaraka, tsy ho afa-mandositra ny ady i Shina. Satria voahodidin'ny firenena fahavalo izay mifandray amin'ny Etazonia i Shina, mety ‘handoro’ ny vavahady aorian'i Shina i Washington. Amin'izany, afaka mandoro ny tokotanin'i Etazonia koa i Shina. “
Momba ny fanitarana ny kolontsaina Shinoa ihany koa ny lahatsoratr'i Ertai manaraka, mitondra ny lohateny hoe, “fananihambohitra tsy misy fitaovam-piadiana ataon'i Shina”. Hoy izy nanoratra:
“Tao anatin'ny taona vitsivitsy, hita nitombo ny isan'ny tanora avy any Azia Afovoany tonga nianatra ny fiteny sy ny kolontsaina Shinoa. Araka ny fampahalalan'ny Departemantan'ny Fampianarana ao amin'ny faritra, eo amin'ny 3,2 arivo ny isan'ny mpianatra vahiny. Amin'izao fotoana izao, nosokafana any amin'ireo fanjakana any Kazakhstan, Ozbekistan sy Turkmenistan ny Ivon-toerana Confusius vaovao, fianarana teny Shinoa, sy foibe manokana. “
Manamarika ihany koa ny mpanoratra fa tamin'ny herintaona, nihaona in-dimy ny manampahefana Shinoa sy Kazahstani. Noho izany, arakaraka ny fitomboan'ny fifandraisan'i Kazakhstan amin'i Shina, no hahitana bebe kokoa ny fiantraikan'i Shina eo anivon'ny fiarahamonina Kazakh. Tokony hanaraka ny fivoaran-draharaha ny rehetra.
Lahatsoratra nalefa tao amin'ny neweurasia ihany koa.